२६ बर्षिया कुमारी छोरीसँग बिहे गर्नेलाई साँढे ३ करोड इनाम घोषणा गरेपछि…. – नेपाली सूर्य
September 20, 2020 Nepali SuryaLeaveaComment on २६ बर्षिया कुमारी छोरीसँग बिहे गर्नेलाई साँढे ३ करोड इनाम घोषणा गरेपछि….
एजेन्सी- मानिसहरुका अनेक सोच तथा चाहना हुन्छन् । सुन्दा पत्याउन मुस्किल पर्छ । बेलाबखत यस्तै अनौठा घ’टनाहरु सार्वजनिक भइरहेका हुन्छन् । एउटा विचित्रको घ’टना सार्वजनिक भएको छ जहाँ एक धनाढ्यले आफ्नी कुमारी छोरीसँग विहे गर्नेलाई साँढे ३ करोडको इनाम दिने घोषणा गरेका छन् । छोरीको बिहे गराउनका लागि थाइल्याण्डका एक धनाढ्य व्यापारीले अनौठो घोषणा गरेका हुन् ।
त्यस्तै,हामीले महिलाहरु ग’र्भव’ती भएको कुरा त थाहा पाई नै राखेका छौँ । र देखिरहेका पनि छौँ । तर पुरुष ग’र्भवति भएको कुरा भने सायदै कसैले नसुनेको हुनुपर्छ । भारताको उत्तर प्रदेशमा एक युवक ग’र्भव’ति फेला परेका छन् । उक्त व्यक्ति कसरी ग’र्भव’ति भए भन्ने खबरले अहिलेको सामाजिक सञ्जाल तातेको छ । उक्त व्यक्ति कसरी ग’र्भवति भए भन्ने खबर बाहिर नआएको भए पनि उनलाई अस्पतालले गर्भवती भएको रिपोर्ट दिएको छ ।
यि महिलाको ३ श्रीमान: अनौठो रहस्य, चौतर्फी हल्ली खल्ली